Inka badan Injineerka Raadinta Raadinta | Martech Zone
Inka badan Injineerinka Raadinta Raadinta
Thursday, April 29, 2010 Isniin, April 11, 2016 Douglas Karr
Shalay, waxaan sameeyay tababar ku saabsan hagaajinta mashiinka raadinta waxaanan ku casuumay nashqadeeyayaasha, qoraayaasha, wakaaladaha iyo xitaa tartamayaasha inay yimaadaan tababarka. Waxay ahayd guri buuxa oo si fiican u socday.
Ku meelaynta makiinadaha raadinta had iyo jeer jawaabtu maaha - shirkaddu waa inay lahaato waxyaabo wax ku ool ah, goob weyn, iyo waddo ay kula macaamilaan shirkadda.
Waxaan u maleynayaa naftayda inaan ahay khabiir ku takhasusay mashiinka raadinta. Shirkadaha badankood, waan wanaajin karaa goobahooda ama barnaamijyadooda, waxaanan siin karaa macluumaad ku saabsan sida loo sameeyo cilmi baarista erayga muhiimka ah, waxaanan tusi karaa sida loogu soo bandhigo waxyaabahaas qaab xaqiijin kara in laga helo meesha ay rabaan inay noqdaan.
Markaad gudaha ka fiiriso ururkaaga iyo dadaalkaaga Waxkudhinta Mashiinka Raadinta, waxaa jira meel aan lagaa soo celin adiga iyo sidoo kale. Waxba igama gelin inta aad ka aqriso qadka internetka ee ku saabsan SEO, cidda aad rumeysan tahay, waxaad u maleyneyso inaad ogtahay… ma lihid waxa ay u baahan tahay si aad irbadda u dhaqaajiso meel cayiman ka dib. Qaar badan oo ka mid ah macaamiisha aan la soo shaqeeyay ee leh khibradda SEO-ga ayaa si aad ah ugu fiican darajooyin faro ku tiris ah - laakiin si wax ku ool ah ha u beddelin rajooyinka dhab ahaantii ka gaadhay boggooda.
Haddii aadan haysan ilo aad ku isticmaasho shirkad caan ah, jooji qaska. Waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo lagu beddeli karo oo lagu tartami karo, keyword aad u sarreeya:
Waad bartilmaameedsan kartaa dabada-dheer, ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee dhab ahaantii hagaajiya sicirkaaga beddelka maxaa yeelay waxay u horseedaan tiro yar oo rajo wanaagsan leh.
Waad hagaajin laheyd naqshadeynta bartaada si aad ugu muuqato xirfadle, urur aamin ah, hagaajinta wicitaan-ficil, iyo bogagga degitaanka - hagaajinta guud ahaan heerarka beddelka.
Waxaad wax ka beddeli kartaa waxyaabahaaga oo aad fulin kartaa tijaabooyin badan oo kala duwan, a / b / n tijaabin iyo kala-qaybin si loo hagaajiyo heerarka beddelka ee rajooyinka ka tagaya boggaaga.
Waad hagaajin laheyd cinwaanada boggaaga iyo sharraxaaddaada meta si aad u horumariso ku-habboonaanta boggaaga natiijooyinka mashiinka raadinta (SERP) sidaa darteed in badan oo ka mid ah isticmaaleyaasha mashiinnada raadinta ay si dhab ah u riixaan gelitaankaaga bogga natiijooyinka Hubi kanaga Qiimaha guji-illaa Google Webmaster Central.
Waxaad si wax ku ool ah uga faa'iideysan kartaa warbaahinta bulshada iyo iimaylka suuqgeynta si aad ula macaamisho, dib ula fal gasho oo aad uga xumaato macaamiishaada - hagaajinta natiijooyinka guud ee ganacsiga.
Mashiinnada wax lagu raadsado ayaa u noqday aalad muhiim u ah shirkadaha daabulaya xeeladaha suuq-geynta gudaha bo laakiin taasi micnaheedu maahan inaad ka faa'iideysanayso dhammaan ilahaaga si aad isugu daydo inaad ku ciriiriso wiqiyad kasta oo ugu dambeysay. Waxaad u baahan tahay inaad sameyso dadaal ku filan si aad u raacdo dhaqanka ugu fiican, laakiin waqtigaaga dheeriga ah si wax ku ool ah u isticmaal. Haddii darajaynta ereyada muhiimka ah ee tartanku yahay ikhtiyaarkaaga keliya ama uu leeyahay soo-celinta ugu badan ee maalgashiga, maal-geli a shirkadda raadinta mashiinka raadinta sida kuweenna, Highbridge. Haddii soo noqoshada maalgashiga aysan jirin, waxaad diirada u saartaa xeelado kale oo kordhin doona natiijooyinkaaga ganacsi guud.
Tags: Content SuuqEmail Marketingkeywordsereyada muhiimka ah ee dheeraadka ahsharraxaadda metacinwaanada boggawarbaahinta bulshadadesign web
Waa maxay La-Taliyaha Suuqgeynta Emailka oo Ma U Baahanahay Mid?
Ma Qorshe Ganacsi Muuqaal ah Adiguu Adiguu kugula Taaganyahay?
Apr 29, 2010 at 12: 31 PM
Waxaan rajeyneynaa in qaar ka mid ah horumariyeyaasha webka ee ka qeybgalay ay barteen waxyaabo yar. Ma jiraan wax la mid ah u socoshada websaydhada macaamiisha ugu fadhiya 5 lambar oo aan lahayn cinwaanno bog ama tilmaamo meta ah oo si habboon loo qabtay, ama leh guryo badan oo URL ah. Iyo wax kale… degel dhise dadka, ha dhisin ama dib uhabayn websaydh adoon samaynin baaritaanka ereyga muhiimka ah ama aan qof kale ku samayn. Waa arrin taxaddar leh.